သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Crystal Geode ကို Project မှ Make
တစ်ဦး Crystal Geode ကို Make ရန်ကဘယ်လို
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Crystal Geode ကိုတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း
သဘာဝ Geode crystals ၏သိုက်ဆံ့ကြောင်းဆွန်းကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦး Geode ရရှိရန်တစ်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအချိန်အပိုင်းအခြားမရှိဘူးနှင့် Geode ကိရိယာအစုံကိုဝယ်ခြင်းငှါမလိုချင်ကြဘူးယူဆရင်, ကကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြည်လင် Geode စေရန်လွယ်ကူ alum , အစားအစာအရောင်နှင့်ပဲရစ်၏ဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂတေသို့မဟုတ် eggshell ။
crystal Geode ကိုပစ္စည်းများ
ပဲရစ်၏အင်္ဂတေ (ဝါသနာစျေးဆိုင်၌တွေ့) သို့မဟုတ်တစ်ဦး eggshell
အဆိုပါ Geode ကိုပြင်ဆင်ပါ
သင်ဒီမှာသွားနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ သငျသညျတခုကြက်ဥပွင့်လင်း crack နှင့်တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်နှင့်ဆေးအခွံကိုသုံးပါသင့်ရဲ့ Geode များအတွက် (ဥပမာ, အကာလ၌ရှိသကဲ့သို့နိုင်ပါတယ် ကြေးနီ sulfate Geode စီမံကိန်းကို ) သို့မဟုတ်သင်ပဲရစ် '' ရော့ခ် '' တစ်ဦးအင်္ဂတေပွငျဆငျနိုငျ:
ပထမဦးစွာသင်ဆွန်းရော့ခ်ပုံသှငျးနိုငျသညျ့တစ် rounded ပုံသဏ္ဍာန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်အမြှုပ်ကြက်ဥစက္ဏူထူအတွက်စိတ်ကျတစျဦး၏အောက်ခြေတွင်အကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကကော်ဖီခွက်ကိုသို့မဟုတ်စက္ကူခွက်အတွင်းမှပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသတ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ထူငါးပိလုပ်ပဲရစ်အချို့အင်္ဂတေနှင့်အတူရေအနည်းငယ်ရောမွှေပါ။ သငျသညျ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် အမျိုးအနွယ်ကို crystals alum ၏, သင်အင်္ဂတေအရောအနှောသို့သူတို့ကိုငါနှိုးဆော်နိုင်ပါ။ အမျိုးအနွယ်ကို crystals များကိုသုံးနိုငျ nucleation က်ဘ်ဆိုက်များ တစ်ဦးထက်ပိုသည့်သဘာဝ-ရှာဖွေနေ Geode ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အတွက် crystals များအတွက်။
ပန်းကန်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်စေခြင်းငှါစိတ်ကျရောဂါ၏နှစ်ဖက်နှင့်အောက်ခြေဆန့်ကျင်ပဲရစ်၏အင်္ဂတေနှိပ်ပါ။ ကွန်တိန်နာတင်းကျပ်လျှင်၎င်းသည်အင်္ဂတေဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်နိုင်အောင်, ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးသုံးပါ။
မှိုကနေဖယ်ရှားခြောက်သွေ့ပြီးမြောက်ရန်ဘေးဖယ်ထားပြီးတော့, ကို set up ဖို့အင်္ဂတေအဘို့အကြောင်းကိုမိနစ် 30 ခွင့်ပြုပါ။ သငျသညျပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးအသုံးပြုခဲ့လျှင်သင်ဆွဲထုတ်ပြီးနောက်, ကချွတ်လက်သည်း အဆိုပါ အင်္ဂတေ Geode ကွန်တိန်နာထဲက။
ကကပ်သီးကပ်သတ်ရပ်သည်အထိ alum အတွက်မွှေပေးပါ။ အနည်းငယ် alum အမှုန့်ဖလားအောက်ခြေမှာစုပြုံမှစတင်သည်သောအခါဤတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဆန္ဒရှိလျှင်, အစားအစာအရောင်ထည့်ပါ။ အစားအသောက်အရောင် crystals ရာဆွဲမထားဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအရောင်ဟာ crystals ရောင်စုံပေါ်လာဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သော eggshell သို့မဟုတ်အင်္ဂတေ, ပါဘူး။
ခွက်သို့မဟုတ်ပန်းကန်အတွင်း၌သင့်ရဲ့ eggshell သို့မဟုတ်အင်္ဂတေ Geode သတ်မှတ်မည်။ သင်က alum ဖြေရှင်းချက်ရုံ Geode ၏ထိပ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစားသောကွန်တိန်နာများအတွက်ရည်ရွယ်နေကြသည်။
ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကွန်တိန်နာသို့လျှံများနှင့်နောက်ဆုံးတွင် Geode ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြု, အ Geode သို့ alum ဖြေရှင်းချက်သွန်းလောင်း။ မည်သည့် undissolved alum အတွက်လောင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်မည်မဟုတ်ပါရှိရာတည်နေရာတစ်ခုအတွက် Geode သတ်မှတ်မည်။ အဆိုပါ crystals ကြီးထွားရန်အဘို့အရက်အနည်းငယ် Allow ။
သင်သည်သင်၏ Geode ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူကျေနပ်နေကြသည်သောအခါ, ဖြေရှင်းချက်ကနေဖယ်ရှားကြောင့်ခန်းခြောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သင်ကယိုစီးကျဖြေရှင်းချက်လောင်းနိုင်။ သင်စားရန်အဘို့အအတိအကျမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏စဉ်ကလည်းကောင်းအဆိပ်မဟုတ်ပါဘူးဒါ alum, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ် Pickled အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆများနှင့်ဖုန်မှုန့်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လှပသောသင့်ရဲ့ Geode ထားပါ။ သင်ကစက္ကူသုတ်ပဝါသို့မဟုတ်တစ်သျှူးများစက္ကူတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး display ကိုအမှု၏အတွင်းပိုင်းပတ်ရစ်တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
Environmental Science သို့တရားမျှတသောစီမံကိန်းများ
လက်ကမ်းတွင်သင့်အကြိုက်ဆုံးကလေးစာအုပ်များနှင့်အတူသင်ယူခြင်း: စာအုပ်ထက် ကျော်လွန်.
အီတလီ 100 အတိတ်မှ Count လုပ်နည်း
ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ Glassner ရဲ့ "ယဉ်ကျေးမှုကွောကျရှံ့ခွငျး၏" စာတမ်းလျှောက်ထားခြင်း
တစ်နှစ်တာအားဖြင့်မိုက်ကယ် Crichton, Movies
အဆိုပါ 10 အကြီးဆုံးမြို့ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံများ
Valentine Day ကို 19 ဂန္ထဝင်ရော့ခ်မတ်ေတာသသီချင်းများ
စိန့် Padre ပီအိုင်အိုနှင့်ဂါးဒီးယန်းကောင်းကင်တမန်: ငါ့ကိုသင့်ရဲ့အိန်ဂျယ် Send
America မှာအပြာရောင်ဥပဒေ Origins
တစ်ဦးနွေရာသီမရှိရင် the Year 1816 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းမိုးလေဝသသဘာဝဘေးခဲ့
အကောင်းဆုံးကြောက်စရာဘာတွေလဲ (အရမ်းကြောက်စရာသို့သော်မ!) ကလေးတွေကအဘို့အ Animated, Movies?
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း 10 REM သီချင်းများ